နာမည်ကြီး ကွေ့တီယိုနဲ့ ကြက်ဥပေါင်း စားချင်စရာ စံရိပ်ငြိမ်က SIAMM မှာ
5 Nov 2018 . 4:34 PM
ကွေ့တီယိုထဲမှာလေ ငယ်ငယ်တုန်းက ယိုးဒယားကြက်ပေါင်းခေါက်ဆွဲထုပ်တွေရဲ့ အိတ်ခွံကပုံလို ကြက်ပေါင်ကြီးတွေနဲ့ ပုံမြင်ပြီး ရှလွတ်ဆို သွားရေတောင်ကျမိတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် စံရိပ်ငြိမ်မှာ ဟိုးတလောကမှ နာမည်ကြီးလာတာ မြင်ထားလို့ သိကြလား ဘော်ဒါတို့ရေ။
၂၄ နာရီစားဖို့သောက်ဖို့ပဲ အတွေးထဲစိုးမိုးနေကျလူတွေဆိုရင်တော့ သိလောက်မယ်။ ကွေ့တီယိုထဲကြက်ပေါင်ကြီးနဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်တွေနဲ့ မြင်ရုံနဲ့တင် ပြေးစားချင်မိတဲ့ SIAMM ဆိုတဲ့ ကွေ့တီယို အိမ်ဆိုင်လေး ကို ဒီနေ့ အခရာက သွားစားခဲ့တာလေး ပြောပြချင်လို့။
အဲ့ဒီဆိုင်လေးက ကွေ့တီယိုတစ်မျိုးတည်းပဲရတာ။ ကျန်တာ ဘာမှထွေထွေထူးထူးမရှိတဲ့ဆိုင်လေး။ ပြီးတော့ ဆိုင်လို့ပြောလို့ကိုမရတာဆို။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမ်ရှေ့မှာကော်ခုံလေးတွေချရောင်းတာကိုး။ အဟုတ်ပဲဗျို့။ တကယ့်အိမ်ဆိုင်မှ အိမ်ဆိုင်လေး။ တော်ပါသေးရဲ့ ကွေ့တီယို ပုံလေး အိမ်ရှေ့မှာ ချိတ်ထားပေလို့။
ဆိုင်လေးကတော့ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ “SIAMM” ပါတဲ့။ ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့နေရာကလည်း တော်တော်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပဲ။ သူများဆိုင်တွေလို လမ်းမတန်းတွေ၊ Shopping Mall တွေမဟုတ်ဘဲ စံရိပ်ငြိမ် ဂမုန်းပွင့်ရှေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်မှာ AYA Bank ကြီးရှိတယ်မလား? အဲ့ဘဏ်ရဲ့ ဘေးကပ်ရက်လေးမှာ လက်ခုပ်ပင်လမ်းဆိုတဲ့ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းသေးသေးလေး ရှိသတဲ့။ အဲ့လမ်းလေးထဲ ဝင်သွားရင်အလည်လေးမှာပဲ ဆိုင်လေးရှိပါတယ်။
ဘာတွေရလဲဆို ကြက်ပေါင်းနဲ့ ဝက်သားပြား ကွေ့တီယို အသုပ်၊အရည်ရယ်၊ ကြက်ဥကင်ရယ်၊ အအေးရယ် ဒါဆိုမှ ဒါပဲရပါတယ်လို့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဆိုင်ရဲ့ နာမည်ကြီးက ကွေ့တီယိုဆိုတော့ ကွေ့တီယိုအရည်လေးကိုပဲ ဝက်သားပြားလေးနဲ့ စားချင်တာမို့ အဲ့ဒါလေးတစ်ပွဲ၊ ကြက်ဥကင်လေးတစ်ပွဲနဲ့ သရက်သီးဖျော်ရည်လေး မှာသောက်ခဲ့တယ်။
ကွေ့တီယို ဆိုင်တော်တော်များများ စားခဲ့ဖူးတဲ့ ကွေ့တီယို အကြိုက်၊ ကွေ့တီယိုခရေဇီတွေဆိုရင်တော့ ဒီဆိုင်လေးက ထင်သလောက် မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက် သိပ်မကိုက်လောက်ပါဘူးနော်။
ပွဲပမာဏက အရည်ဆိုတော့ များတယ်။ ဝက်သားပြားလည်း အပြားကြီးကြီး ၅ပြားလောက်ပါတယ်။ အရည်လေးကလည်း ချက်ထားတာ သောက်ပျော်တယ် မဆိုးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကွေ့တီယိုစားခဲ့တဲ့ထဲ ကန်စွန်းရိုးတွေများနေတာ၊ ငရုတ်သီးရဲရဲနဲ့ လေးလေးစပ်စပ်လို့ ကွေ့တီယိုကို အထင်မှားပြီး လာစားကြမယ့်သူတွေအတွက်တော့ စိတ်ကျေနပ်မှုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဈေးနှုန်းလေးကလည်း ၂၂၀၀ ဆိုတော့ သာမန်ကွေ့တီယိုတစ်ပွဲထက်စာရင် ဈေးများသလားပဲနော့်။ ဒါပေမယ့် ကွေ့တီယိုကြိုက်တဲ့သူတွေ၊ ခံတွင်းရှင်းရှင်းစားချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ တကူးတကလာပြီးစားဖူးကြည့်သင့်တဲ့ထဲပါပါတယ်။ နာမည်ကြီး တစ်ပွဲ ၇၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ တစ်လုတ်စာဆိုင်ကြီးထက်စာရင် အရသာပိုကောင်းပါတယ်။
အခရာကတော့ နောက်တခေါက်လမ်းကြုံရောက်ခဲ့ရင် ကြက်ပေါင်နဲ့ တခါလာဆွဲဦးမယ်လို့ အားခဲခဲ့ကြောင်းပါ။ သူနဲ့ တွဲဖက်လို့ လိုက်တဲ့အစပ်အဟပ်လေးက သရက်ဆီနဲ့ဖျော်တဲ့ ဖျော်ရည်ချဉ်ချဉ်လေး။ တစ်ခွက် ၆၀၀ နဲ့ စိတ်တိုင်းကျကျ သောက်ရတဲ့ထိကို အရသာကောင်းပါ့။ ဈေးလည်း မဆိုးဘူး။ လာချပေးတဲ့ခွက်ကလေးကအစ ချစ်စရာလေး။ ခွက်က နည်းနည်းညစ်ပတ်နေတာလေးတော့ မိမိ မကြိုက်မိပါနော်။
ဒီနေရာမှာ ရှိတာအကုန်ချ စားမဟလို့ ကြံရွယ်နေတဲ့ အစားတလိုင်းတွေ ကြက်ဥကင်ကိုပါ မှာပြီဆိုရင် စားသောက်စရာ အရသာပျက်သွားမှာစိုးလို့ နည်းနည်းညွှန်းပါရစေနော်။ ကွေ့တီယိုရဲ့ သဘောသဘာဝက အရည်မွှေးမွှေးခပ်ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ ခံတွင်းရှင်းရှင်း ရှလွတ်ရှလွတ်ဆိုပြီး စားရတာမျိုးလေ။ အဲ့ကွေ့တီယိုအရသာကိုက ပေါ့တာဆိုတော့ ကြက်ဥပေါင်းက အရင်ရောက်လာတဲ့အခါ ကွေ့တီယိုကို အရင်စားပြီးကုန်မှ ကြက်ဥပေါင်းဆက်စားဖို့ အကြံပေးချင်လို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆို ကြက်ဥပေါင်းကအရသာလေး ခပ်လေးလေးနဲ့ဆိုတော့ သူ့ကိုစားပြီးမှ ကွေ့တီယိုစားမယ်ဆို ကွေ့တီယိုရဲ့ အရသာပျက်သွားမှာစိုးလို့ပါ။
အခရာစားခဲ့တော့ ကွေ့တီယိုစားရင်းကြက်ဥပေါင်းပါသွပ်တာ ကွေ့တီယိုပြန်စားတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နာမည်ကြီးနေတဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ တခေါက်လောက်တော့ မရောက်မဖြစ်သွားစားကြည့်ဖို့ ကွေ့တီယိုသမားတွေကို ညွှန်ပေးလိုက်တယ်နော်။
တော်ရုံသိပ်မကြိုက်ရင်တော့ ဝေးဝေးလံလံတကူးတကသွားစားဖို့ထိ မတိုက်တွန်းပါဘူးနော်။ ပုံမှန်အရသာပဲမို့ပါ။ ဒီလောက်ဆို အခရာက စားခဲ့တဲ့အရသာကို အရှိအရှိအတိုင်း အမှန်သေချာရေးပေးထားတာမို့ သွားစားဖို့ကြံနေသူတွေ ဒီReview လေးသေချာဖတ်ပြီးမှ သွားစားနိုင်ကြပါပြီလို့။
“SIAMM”ပါတဲ့နော်။ မနက် ၁၁ နာရီလောက်ကနေ ကုန်တဲ့အချိန်ထိရောင်းပါသတဲ့နော်။ ဘတ်စ်နဲ့ဆို စံရိပ်ငြိမ် ဂမုန်းပွင့်ကိုရောက်တဲ့ ဘယ် YBS မဆို စီးလို့ရပါတယ်လို့။
နာမညျကွီး ကှတေီ့ယိုနဲ့ ကွကျဥပေါငျး စားခငျြစရာ စံရိပျငွိမျက SIAMM မှာ
ကှတေီ့ယိုထဲမှာလေ ငယျငယျတုနျးက ယိုးဒယားကွကျပေါငျးခေါကျဆှဲထုပျတှရေဲ့ အိတျခှံကပုံလို ကွကျပေါငျကွီးတှနေဲ့ ပုံမွငျပွီး ရှလှတျဆို သှားရတေောငျကမြိတဲ့ ဆိုငျလေးတဈဆိုငျ စံရိပျငွိမျမှာ ဟိုးတလောကမှ နာမညျကွီးလာတာ မွငျထားလို့ သိကွလား ဘျောဒါတို့ရေ။
၂၄ နာရီစားဖို့သောကျဖို့ပဲ အတှေးထဲစိုးမိုးနကေလြူတှဆေိုရငျတော့ သိလောကျမယျ။ ကှတေီ့ယိုထဲကွကျပေါငျကွီးနဲ့ ငရုတျသီးမှုနျ့တှနေဲ့ မွငျရုံနဲ့တငျ ပွေးစားခငျြမိတဲ့ SIAMM ဆိုတဲ့ ကှတေီ့ယို အိမျဆိုငျလေး ကို ဒီနေ့ အခရာက သှားစားခဲ့တာလေး ပွောပွခငျြလို့။
အဲ့ဒီဆိုငျလေးက ကှတေီ့ယိုတဈမြိုးတညျးပဲရတာ။ ကနျြတာ ဘာမှထှထှေထေူးထူးမရှိတဲ့ဆိုငျလေး။ ပွီးတော့ ဆိုငျလို့ပွောလို့ကိုမရတာဆို။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမျရှမှေ့ာကျောခုံလေးတှခေရြောငျးတာကိုး။ အဟုတျပဲဗြို့။ တကယျ့အိမျဆိုငျမှ အိမျဆိုငျလေး။ တျောပါသေးရဲ့ ကှတေီ့ယို ပုံလေး အိမျရှမှေ့ာ ခြိတျထားပလေို့။
ဆိုငျလေးကတော့ အပျေါမှာပွောထားတဲ့ “SIAMM” ပါတဲ့။ ဆိုငျဖှငျ့ထားတဲ့နရောကလညျး တျောတျောလြှို့ဝှကျဆနျးကွယျပဲ။ သူမြားဆိုငျတှလေို လမျးမတနျးတှေ၊ Shopping Mall တှမေဟုတျဘဲ စံရိပျငွိမျ ဂမုနျးပှငျ့ရှမေ့ကျြနှာခငျြးဆိုငျဘကျမှာ AYA Bank ကွီးရှိတယျမလား? အဲ့ဘဏျရဲ့ ဘေးကပျရကျလေးမှာ လကျခုပျပငျလမျးဆိုတဲ့ လမျးကဉျြးကဉျြးသေးသေးလေး ရှိသတဲ့။ အဲ့လမျးလေးထဲ ဝငျသှားရငျအလညျလေးမှာပဲ ဆိုငျလေးရှိပါတယျ။
ဘာတှရေလဲဆို ကွကျပေါငျးနဲ့ ဝကျသားပွား ကှတေီ့ယို အသုပျ၊အရညျရယျ၊ ကွကျဥကငျရယျ၊ အအေးရယျ ဒါဆိုမှ ဒါပဲရပါတယျလို့။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဆိုငျရဲ့ နာမညျကွီးက ကှတေီ့ယိုဆိုတော့ ကှတေီ့ယိုအရညျလေးကိုပဲ ဝကျသားပွားလေးနဲ့ စားခငျြတာမို့ အဲ့ဒါလေးတဈပှဲ၊ ကွကျဥကငျလေးတဈပှဲနဲ့ သရကျသီးဖြျောရညျလေး မှာသောကျခဲ့တယျ။
ကှတေီ့ယို ဆိုငျတျောတျောမြားမြား စားခဲ့ဖူးတဲ့ ကှတေီ့ယို အကွိုကျ၊ ကှတေီ့ယိုခရဇေီတှဆေိုရငျတော့ ဒီဆိုငျလေးက ထငျသလောကျ မှနျးခကျြနဲ့နှမျးထှကျ သိပျမကိုကျလောကျပါဘူးနျော။
ပှဲပမာဏက အရညျဆိုတော့ မြားတယျ။ ဝကျသားပွားလညျး အပွားကွီးကွီး ၅ပွားလောကျပါတယျ။ အရညျလေးကလညျး ခကျြထားတာ သောကျပြျောတယျ မဆိုးဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကှတေီ့ယိုစားခဲ့တဲ့ထဲ ကနျစှနျးရိုးတှမြေားနတော၊ ငရုတျသီးရဲရဲနဲ့ လေးလေးစပျစပျလို့ ကှတေီ့ယိုကို အထငျမှားပွီး လာစားကွမယျ့သူတှအေတှကျတော့ စိတျကနြေပျမှုဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။
ဈေးနှုနျးလေးကလညျး ၂၂၀၀ ဆိုတော့ သာမနျကှတေီ့ယိုတဈပှဲထကျစာရငျ ဈေးမြားသလားပဲနေျာ့။ ဒါပမေယျ့ ကှတေီ့ယိုကွိုကျတဲ့သူတှေ၊ ခံတှငျးရှငျးရှငျးစားခငျြတဲ့သူတှအေတှကျတော့ တကူးတကလာပွီးစားဖူးကွညျ့သငျ့တဲ့ထဲပါပါတယျ။ နာမညျကွီး တဈပှဲ ၇၀၀ ဝနျးကငျြနဲ့ တဈလုတျစာဆိုငျကွီးထကျစာရငျ အရသာပိုကောငျးပါတယျ။
အခရာကတော့ နောကျတခေါကျလမျးကွုံရောကျခဲ့ရငျ ကွကျပေါငျနဲ့ တခါလာဆှဲဦးမယျလို့ အားခဲခဲ့ကွောငျးပါ။ သူနဲ့ တှဲဖကျလို့ လိုကျတဲ့အစပျအဟပျလေးက သရကျဆီနဲ့ဖြျောတဲ့ ဖြျောရညျခဉျြခဉျြလေး။ တဈခှကျ ၆၀၀ နဲ့ စိတျတိုငျးကကြ သောကျရတဲ့ထိကို အရသာကောငျးပါ့။ ဈေးလညျး မဆိုးဘူး။ လာခပြေးတဲ့ခှကျကလေးကအစ ခဈြစရာလေး။ ခှကျက နညျးနညျးညဈပတျနတောလေးတော့ မိမိ မကွိုကျမိပါနျော။
ဒီနရောမှာ ရှိတာအကုနျခြ စားမဟလို့ ကွံရှယျနတေဲ့ အစားတလိုငျးတှေ ကွကျဥကငျကိုပါ မှာပွီဆိုရငျ စားသောကျစရာ အရသာပကျြသှားမှာစိုးလို့ နညျးနညျးညှနျးပါရစနေျော။ ကှတေီ့ယိုရဲ့ သဘောသဘာဝက အရညျမှေးမှေးခပျပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ ခံတှငျးရှငျးရှငျး ရှလှတျရှလှတျဆိုပွီး စားရတာမြိုးလေ။ အဲ့ကှတေီ့ယိုအရသာကိုက ပေါ့တာဆိုတော့ ကွကျဥပေါငျးက အရငျရောကျလာတဲ့အခါ ကှတေီ့ယိုကို အရငျစားပွီးကုနျမှ ကွကျဥပေါငျးဆကျစားဖို့ အကွံပေးခငျြလို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆို ကွကျဥပေါငျးကအရသာလေး ခပျလေးလေးနဲ့ဆိုတော့ သူ့ကိုစားပွီးမှ ကှတေီ့ယိုစားမယျဆို ကှတေီ့ယိုရဲ့ အရသာပကျြသှားမှာစိုးလို့ပါ။
အခရာစားခဲ့တော့ ကှတေီ့ယိုစားရငျးကွကျဥပေါငျးပါသှပျတာ ကှတေီ့ယိုပွနျစားတော့ ခပျပေါ့ပေါ့ကွီးဖွဈသှားတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ပါ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ နာမညျကွီးနတေဲ့ဆိုငျဆိုတော့ တခေါကျလောကျတော့ မရောကျမဖွဈသှားစားကွညျ့ဖို့ ကှတေီ့ယိုသမားတှကေို ညှနျပေးလိုကျတယျနျော။
တျောရုံသိပျမကွိုကျရငျတော့ ဝေးဝေးလံလံတကူးတကသှားစားဖို့ထိ မတိုကျတှနျးပါဘူးနျော။ ပုံမှနျအရသာပဲမို့ပါ။ ဒီလောကျဆို အခရာက စားခဲ့တဲ့အရသာကို အရှိအရှိအတိုငျး အမှနျသခြောရေးပေးထားတာမို့ သှားစားဖို့ကွံနသေူတှေ ဒီReview လေးသခြောဖတျပွီးမှ သှားစားနိုငျကွပါပွီလို့။
“SIAMM”ပါတဲ့နျော။ မနကျ ၁၁ နာရီလောကျကနေ ကုနျတဲ့အခြိနျထိရောငျးပါသတဲ့နျော။ ဘတျဈနဲ့ဆို စံရိပျငွိမျ ဂမုနျးပှငျ့ကိုရောကျတဲ့ ဘယျ YBS မဆို စီးလို့ရပါတယျလို့။